Global Voices teny Malagasy » Fomba Fijery Ivelan’ny Firenena : Mandefitra Kokoa Amin’ny Fanitsakitsaham-bady ny Frantsay, Fa Tsy Amin’ny Fiarahan’olon-droa · Global Voices teny Malagasy » Print
Fomba Fijery Ivelan'ny Firenena : Mandefitra Kokoa Amin'ny Fanitsakitsaham-bady ny Frantsay, Fa Tsy Amin'ny Fiarahan'olon-droa
Voadika ny 25 Avrily 2017 15:56 GMT 1	 · Mpanoratra Lova Rakotomalala Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Andrefana, Frantsa, Hevitra, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina, Ny Tetezana - The Bridge
“Sakafo ambony bozaka” (1863), Edouard Manet. Sary azon'ny rehetra ampiasaina, Wikipedia
Nanontany ireo tonian-dahatsoratra tao aminy ny Global Voices vao haingana: inona no lafiny saro-takarina indrindra ao amin'ny toerana onenanao, na ny niavianao?
Havoaka ao anatin'ny andian-dahatsoratra mampiseho ireo fitsarana an-tendrony sy manome fomba fijery noalefahana kokoa any amin'ny faritra sasany manerantany ny valintenin'izy ireo. Ity lahatsoratra voalohany ity dia avy amin'iny tonian-dahatsoratry ny mpiteny frantsay an'ny Global Voices, Lova Rakotomalala, monina ao Paris, Frantsa.
Fitsarana an-tendrony mafy tsy ho faty izany: somary manana fiainana ara-pananahana malalaka kokoa ny Frantsay. Tsy manavotra koa ny literatiora sy ny kolontsaim-bahoaka, fa feno olo-malaza Frantsay manana toe-tsaina tsy mivaky loha tanteraka. Ohatra? Ny Vicomte de Valmont , ny Marquis de Sade , Brigitte Bardot , Dominique Strauss-Kahn . ary hatramin'i Pepe le Putois  mihitsy aza!
Tsy tena hoe tsy mitombina tanteraka ity sary ity. Mitady hanana toe-tsaina mamela ny Frantsay amin'ny raharaha fanitsakitsaham-bady ataon'ireo mpitarika ara-politikan'izy ireo. Namoy ny ainy noho ny fahasemporana (apoplexie) tao amin'ny Lapan'i Elysée nandritra ny firaisany ara-nofo tamin'ny vadikeliny teo anelanelan'ny fivorian'asa indroa miantoana i Felix Faure , filohan'i Frantsa taona 1895 ka hatramin'ny taona 1899. Samy nanatrika ny fandevenana azy ny vady sy ny vadikelin'ny filoha François Mitterrand miaraka amin'ny zanak'izy ireo avy. Vao haingana indrindra, nisy ny fisakaizana malaza  teo amin'ny filoha François Hollande sy ilay mpiantsehatra Julie Gayet.
Nilaza ny fanadihadiana avy amin'ny Foibem-pikarohana Pew fa mandefitra kokoa amin'ny fifampirafesina ireo Frantsay mpifidy  tsy tahaka ireo mpifidy any amin'ny firenen-kafa : 47 % monja tamin'ireo natao fanadihadiana no nilaza fa tsy azo ekena ara-pitondratena ny fanitsakitsaham-bady. Ankatoavin'ireo andrim-panjakana, fara faharatsiny amin'ny fomba tsy ofisialy izany toe-tsaina (fanitsakitsaham-bady) izany. Namako Frantsay iray nandao ny tanindrazany sy nieritreritra hifindra ao Madagasikara noho ny fifanarahana ara-injeniera mandritra ny herintaona no nahazo taratasy avy amin'ny Masoivoho Frantsay ao Madagasikara, mampitandrina azy fa mampidi-doza amin'ny vahiny hiasa ao aminy ilay firenena. Nihevitra ilay namako fa milamina ny firenena ka nangataka fanazavana fanampiny. Tahaka izao ny valinteny avy amin'ny Masoivoho: “Tanora manambady ianao. Mety hamonjy anao atsy ho atsy ny vadinao, ka ny fandehanana irery aty Madagasikara dia mety hitera-doza amin'ny fiainam-pianakavianao.” Tsy mbola fantatro hatreto hoe ny fitondratena frantsay sa malagasy no ampangaina amin'izany fanambarana izany!
Misy ihany koa ny porofo izay manohitra ny hevitra fa mamela malalaka ny fitsiriritana ara-nofon'izy ireo ny Frantsay. Na dia tsy hentitra kokoa noho ny an'ny firenen-kafa aza ny fenitra ara-kolontsaina Frantsay momba ny fanitsakitsaham-bady, tamin'ny taona 2015, nisy ny dokambarotra fanentanana manerana ny firenena mikasika ny fihaonana amin'ny olon-kafa ankoatra ny vady tao amin'ny tranonkala antsoina hoe Gleeden izay nahazo tsikera goavana avy amin'ny vahoaka  ka tsy maintsy nanaisotra ny dokambarony tany amin'ny tanàndehibe maromaro.
Mpiantsehatra Brigitte Bardot, iray amin'ireo sex symbols nalaza tamin'ny taona 1950 ka hatramin'ny taona 1960. Sary: Michel Bernanau (CC BY-SA 3.0) tao amin'ny Wikimedia Commons.
Tao amin'ny bilaoginy French Yummy Mummy, nanohitra ity fitsarana an-tendrony ity i Muriel Demarcus, Frantsay nanorim-ponenana tany Londra, hoy izy nanazava :
Ao Londra, toa aparitaka fa ny Frantsay no namorona ny fanitsakitsaham-bady. Mampiseho sary mahavariana momba ny fanambadiana malalaka ireo lahatsoratra amin'ny ankapobeny ary midera ireo vehivavy mitelina ny reharehany rehefa miherikerika mijery vehivavy hafa ny vadin'izy ireo. Raha izany, toa tsy dia olana ao Frantsa ny fanitsakitsaham-bady.
Hadalana tanteraka! Jereo, nanitsakitsa-bady hatry ny ela ny aristokrasia tao amin'ity firenena (Anglisy) ity (raha tsy hiteny afa-tsy ny fianakavian'ny mpanjaka!). Ary tsy misy ifandraisany amin'ny Frantsay izany, sa tsy izany? Izy ireo ihany no nanao izany. Tsy fananana manokan'ny Frantsay ny fanitsakitsaham-bady.
Fomba tsotra hanadinoana ny lonilony ao amin'izy ireo manokana ny fitiavana ny Frantsay amin'ny fifampirafesina heverina fa ataon'izy ireo.
Inona no ataontsika raha tsy misy ny fitsarana an-tendrony? Indray andro, nanolorana tavy fanariana tain-tsigara (cendrier) aho na dia tsy mifoka aza. Satria Frantsay aho, mihevitra ny olona fa mifoka aho. Saingy tsia.
Ny tahiry avy amin'ny tranonkala Gleeden voalaza etsy ambony ihany koa dia nanohitra ny fiheverana fa miavaka amin'ny fijangajangana ny Frantsay :
Milaza ny tahiry avy amin'ny Gleeden fa azo antoka fa tsy mampirafy kokoa noho ny hafa ny Frantsay. Nahita ny fikarohana manokana nataon'izy ireo fa ny 17 %n'ny Frantsay dia niaiky fa mampirafy, mitovy amin'ny ao Espaina sy Italia.
Raha ny marina, raha tsy maintsy hanadihady lalina momba ny fijerin'ny Frantsay ny fitiavana isika, dia mety hahita fa miezaka manorina sy mampaharitra ny fiarahana izy ireo izay mihoatra ny fitsipika tsotsotra sy manjavozavo momba ny fiarahana amin'olon-tokana (monogamie). Ho an'ny Frantsay, ny zava-dehibe matetika dia ny fiarahan'ny olon-droa amin'ny ankapobeny fa tsy ny fisehoany ara-batana ihany.
Fahatakarana—na famelan-keloka—no lakileny. Ao amin'ny Modern Romance , boky tantaram-pitiavana vaovao amin'ny vanim-potoana nomerika, nanonona ny fikarohana nataon'ny Ivon-toerana Frantsay mpitsapa Hevi-bahoaka (IFOP) ilay mpanao hatsikana Amerikana Aziz Ansari, ary namintina  fa:
Tsy hoe tsy miraharaha ny Frantsay raha mamitaka azy ireo ny sakaizany, fa tsy vaky fo amin'ny fivadihana ihany koa izy ireo. Noho ny toe-tsaina ara-kolontsainan'izy ireo, mitady hamela heloka kokoa amin'ny fampirafesana ny Frantsay.
Nahita ihany koa ity fikarohana ity fa ny 68% ny Frantsay dia mihevitra fa azo atao ny manaja vady mandra pahafaty ary ny 63% mihevitra fa afaka mitia foana izy ireo na dia efa namitaka azy ireo aza ny vadiny.
Psykôlôgy Frantsay, Maryse Vaillant nanazava  ireo tarehimarika ireo:
Nampiseho ny fikarohana nataoko fa ny filavoana amin'ny fakam-panahy dia afaka manampy ny lehilahy hahatakatra ny halehiben'ny fitiavany ny vadiny. Miaraka amin'ny vadiny izy manana tetikasa, tahaka ny fitaizana ny zanak'izy ireo izy, fividianana trano, fananganana fiainana. Tsy mitovy amin'izany kosa ny lehilahy voasariky ny vehivavy tanora kokoa. Indraindray, mila krizy aram-pihetseham-po kely isika mba hahafantarana ny fahasamihafana eo amin'ny fotoanan'ny fahafaham-po sy ny fikolokoloana ny fanambadiana.
“Na dia mora manaiky kokoa ny fanitsakitsaham-bady aza ny Frantsay ary mihevitra izany ho anisan'ny fiainan'olombelona, tokony atao miafina izany”, hoy i Debra Ollivier, mpanoratra ny What French Women Know: About Love, Sex, and Other Matters of the Heart and Mind.  [Inona no Fantatry ny Vehivavy Frantsay momba ny Fitiavana, ny Fananahana sy ny resaka hafa ara-pitiavana sy ao an-tsaina].
Zavatra ataonao any an-takonana izany. Mbola zava-dehibe ny fanambadiana sy ny fahamasinan'ny fianakaviana. Raha manana olon-tiana ianao, dia angamba te-hiaro ny fianakavianao tsy ho voakitikitika ianao. Afa-po ianao miaraka amin'ny olon-tiana iray sady voatandro ny fiainam-pianakaviana. Toa mampihomehy fa miresaka ny soatoavin'ny fianakaviana ao Etazonia isika kanefa tsy manao na inona na inona hiantohana izany. Tsy manana fotodrafitrasa ara-tsosialy tahaka ny ananany isika. Zava-dehibe ny rafi-pianakaviana. Tsy mirodana mora foana izy, saingy rehefa tonga izany, tena mandratra fo tanteraka.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/04/25/98210/
 Vicomte de Valmont: https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Liaisons_dangereuses
 Marquis de Sade: https://en.wikipedia.org/wiki/Marquis_de_Sade
 Brigitte Bardot: https://en.wikipedia.org/wiki/Brigitte_Bardot
 Dominique Strauss-Kahn: https://en.wikipedia.org/wiki/Dominique_Strauss-Kahn
 Pepe le Putois: https://en.wikipedia.org/wiki/Pep%C3%A9_Le_Pew
 Felix Faure: https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Faure
 fisakaizana malaza: https://globalvoices.org/2014/01/23/french-president-francois-hollande-affair-love-julie-gayet/
 mandefitra kokoa amin'ny fifampirafesina ireo Frantsay mpifidy: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/01/14/french-more-accepting-of-infidelity-than-people-in-other-countries/
 nahazo tsikera goavana avy amin'ny vahoaka: http://www.salon.com/2015/03/12/the_french_are_not_as_cool_with_infidelity_as_you_think/
 miavaka amin'ny fijangajangana ny Frantsay: http://www.thelocal.fr/20111007/1418
 Modern Romance: http://www.amazon.com/Modern-Romance-Aziz-Ansari/dp/1594206279
 What French Women Know: About Love, Sex, and Other Matters of the Heart and Mind.: http://www.amazon.com/What-French-Women-Know-Matters-ebook/dp/B002IPZJ74